Wax ka Baro Hubka Il ma qabatada ah Ee Mareykanka Isticmaalo#Warbxin | Xaqiiqonews
Wax ka Baro Hubka Il ma qabatada ah Ee Mareykanka Isticmaalo#Warbxin
Dagaalka Qabow ee dunida hadda ay ju jirto, Waa mid ku saabsan in la iskla diriro fikradaha iyo Caqiidooyinka, hadaba idaacadaha “Radios” waxa ay noqdeen mid ka mid ah hubabka ugu saameynta badnaa ee dagaaalkan.
Baahinada idaacadaha waxa ay ka dusayaan difaac walbo oo bir ah, sidaa darteed galbeedka waxa ay isticmaaleen hubkani bilowgiiba hore ee dagaalkan qabow, VOA iyo BBC waa tusaalayaasha ugu fiican ee hubka Ingiriis iyo Mareynkan noo isticmaaleen.
“VOA waa hub aan isha lagu arki karin, oo Mareynka u isticmaalay dagaalkii Qaboowaa, balse hadda dagaalka wuu dhamaaday VOA ayaa ka guuleysatay Hindiya, hadda ma layaabani in ay diiradda saarayaan dunida Musilimka ah halkaasi oo uu ka bilowday dagaalka cusub oo lagula dagaalamaya maskaxda iyo qalbiga qofka,”sidaasi waxaa yiri N.Bhaskara Rao, oo ah gudoomiyaha xarunta dhexe ee warbaahinta Hindiya NEW Delhi.
M.r Roe waxa uu ka mid ah ragii ka shaqeeyey daraasad Mareykanka uu ka fuliyey Hindiya,1974-kii oo ku saabsaneyd qaabka VOA u saameysay qayimka dhalinyarada Hindiya.
N.Bhaskara Rao ayaa sii raaciyey “U fiirso tirada dadka reer Hindiya ee u haajiray Mareykanka, islamarkaana barbar dhig tirada aaday Ruushka, farqiga aad arkeysaa waa saameyntii laga dhaxlay dacaayaadkii “Propoganda” ee ay baahisay VOA”.
Bishii May 2018 dowladda Burundi ayaa mamnuucday dhageysiga idaacaha BBC-da iyo VOA-da, Ka hor aftida loo qaaday xukun sii dheereysiga madaxweyne Pierre Nkurunziza, iyagoo ku eedeeyey idaacadahan kuwa u shaqeeya dana shisheeye.
Hindiya 2008-dii ayey ku dhawaaqday in dagaalkii aduunka uu dhamaaday sidaa darteedna aan loo baahneyn warbaahinada dibadda kaga imaanaya shucuubta Hindiya.
Wararka VOA Ma yihiin Kuwa Dheeli tiran ?
Gabar u shaqeysa VOA ayaa mar ay ka jawaabeysa isla su,aasha kore waxa ay tiri “Waxa aan ogahay in wariyaasha VOA marka laga hadlo xaqiiqda ah in VOA ay tahay Baahin Ay leedahay dowladdaMareykanka oo loo isticmaalo Propoganada in ay diidaan oo ay isku muujiyaan in ay yihiin kuwa dhexdhexaad ah,Xaqiiqdii si adag ayey u shaqeeyaan si ay u xaqiijiyaan in warka uu yahay mid isku dheeli tiran, sababta ay sidaasi u sameeynayaan waxa ay tahay in aanan lagu caalaamdeyn hal dhinac in ay yihiin oo kale”
Waxa ay hadalkeeda ku dartay ” VOA marka si dhab ah loo hadlo waa caqliyad Mareykan, hase ahaate waxaan leenahay xorriyad saxaafad iyo xoriyad hadal oo aan ku sheegi karno wax walbo oo aan rabno”
Donna Halper oo ah qabiir saxaafadeed ayaa isagan ku jawaabay “VOA waxa ay u adeegtaa Mareykanka taasna ma ahan mid xun”
Siyaasi ka faalooda siyaaasadda dibadda Mareykanka oo lagu magacaabo Noam Chomsky waxa uu aaminsan yahay “Danbiga ugu weyn ee been ah oo la sheego in uu yahay in Beenta lagu qaso run si warka oo dhan uu u muuqdo mid run ah”
“Boqolkiiba boqol VOA waa baahin Propoganda ah, wax badan kama duwan warbaahinada Fox News iyo CNN, waxa ay inta badan isku dayaan in si rer magaalnimo ah ay u difaacaan Qaladaadka Mareykanka” waxaa sidaasi sheegay Chan Yu-Xiang oo ah ka jawaabay su,aasha ah VOA warkeeda ma yahay mid dheeli tiran.
Soomaaliya Waxa ay ka mid tahay wadamada bartilmaameedka u ah Mareykanka waxaana sanadkii 2007-da dib loo howlgiliyey laantii af-ka soomaaliga ee VOA-da, waxaana jira dhageystayaal badan oo ku xiran idaacaddan, dadka ugu badan ee dhageysta waa dadka degan tuulooyinka ee aan heysan Internet iyo Television kuwaasi oo isha kaliya ee ay warka ka helaan ay tahay Idaacadahan.